Amanqanaba amathathu e-Alchemy - iPacacelsus Tria Prima
I-Paracelus Primes ezintathu okanye i-Tria Prima ye-Alchemy
I-Paracelsus ichonge i-primes ezintathu (tria prima) ye-alchemy . Iipromes zihambelana noMthetho wePat Triangle, apho izixhobo ezimbini zihlanganisene ukuvelisa okwesithathu. Kwimenyu yesimanje, awukwazi ukudibanisa i-element sulfure kunye ne- mercury ukuvelisa itafile yetyukliya, kodwa i-alchemy izinto eziye zaziwa ukuba zenze iimveliso ezintsha.
I-Tria Prima: 3 I-Alchemy Primes
Sulfure - I-fluid edibanisa i-High and Low.
Isulfure yayisetyenziselwa ukubonisa amandla amakhulu, ukukhuphuka kwamanzi nokutshabalalisa.
I-Mercury - Umoya wobomi wobomi. I-Mercury yayikholelwa ukuba idlula i-liquid and solid state. Inkolelo yaqhutyelwa kwezinye iindawo, njengoko i-mercury yayicinga ukuba idlulele ubomi / ukufa kunye nezulu / umhlaba.
ITyuwa - Inkalo ebalulekileyo. Iityuwa zimelela amandla okubambisana, ukulungelelanisa, kunye ne-crystallization.
Ukubonakaliswa kweMpawu zoPhulo ezintathu
umhlaba / amanzi
I-Paracelsus yaqulunqa ama-primes amathathu kwi-Sulfur-Mercury Ratio, eyayikholelwa ukuba isinyithi ngasinye senziwe kwisilinganiselo esithile sulfure kunye ne-mercury kwaye isinyithi sinokuguqulwa sibe yiphina isinyithi ngokufaka okanye ukususa isulfure. Ngoko, ukuba umntu ukholelwa ukuba oku kuyenyani, ukukhokelela ngokufanelekileyo kunokuguqulwa ibe yigolide xa i-protocol echanekileyo ingafunyanwa ukulungiswa kwemali yesulfure.
Abakwa-Alchemists baza kusebenza kunye nantathu i-primes ngokusebenzisa inkqubo ebizwa ngokuba yiSolve Et Coagula , eguqulela ukuthetha ukuchithwa nokuqhelanisa. Izinto zokwahlukana ukuze ziphinde zibuye ziqwalaselwe njengendlela yokucoca. Kwi-chemistry yanamhlanje, inkqubo efana nayo isetyenziselwa ukuhlambulula izinto kunye nokuhlanganiswa nge-crystallization.
Imba iyancibilika okanye enye iyachithwa ize ivumeleke ukuba ibuye ivelise imveliso yobungcipheko obuphezulu kunemithombo yendalo.
I-Paracelus yayigcine inkolelo yokuba yonke into ebomini yayineengxenye ezintathu, ezinokumelwa yi-Primes, ngokoqobo okanye ngokomfanekiso (i-alchemy yamanje). Ubume obuthathu buxutyushwa kwizithethe zombini zaseMpuma naseNtshona. Ingqiqo yezinto ezimbini ezidibana kunye nokuba yinto enye idibeneyo. Ukuphikisana nesulfure yamasulane kunye ne-mercury ye-femic yayiza kufaka ityuwa okanye umzimba.
AmaGrike aseMerika aseMelika ayenze iMbali